Maitiro ekuwedzera ecommerce kutengesa | ECommerce nhau
Jose Ignacio | | eCommerce, Kutengesa nhare
Kana iwe uchinetseka kutsvaga nzira nyowani dzekuwana vatengi vakawanda uye kuwedzera mari, ndinogona kukupa mamwe matipi. Maitiro ako ekare anogona kunge akashanda pane imwe nguva, asi nekufamba kwenguva, iwo marongero ekare ekare anogona kuve echinyakare.
Kunyangwe iwe uri bhizinesi nyowani kana wave nebhizinesi kwemakore akati wandei, kuwana yakawanda ecommerce kutengesa kuchabatsira kambani yako. Nehurombo, bhizinesi rinopfuura nemumapani uye rinodzikira. Izvi zvinhu zvinoitika, asi usaore moyo.
Izvo zvakakosha kuti bhizinesi rako rirambe richienderana nezvinoitika zvitsva. Tsika dzevatengi zvachinja, kunyanya mu e-commerce indasitiri. Kubva pane ino maonero, heino nzira dzakanakisa dzekugadzira zvimwe kutengesa pane yako ecommerce saiti.
1 Wedzera kutengesa: tarisa vatengi vako varipo
2 Shandisa vhidhiyo madhimoni
3 Shandisa mapikicha kana uchisanganisira vatengi zvipupuriro
4 Gadziridza zvikamu zveiyo nzira yekutengesa
5 Iwe uri mune pfungwa yekuti vanhu varikukanganisa
6 Vatengi havavimbi webhusaiti yako
7 Nzira dzekuwedzera Kutengesa Kwepamhepo
8 Zvino ita mari idzi
Wedzera kutengesa: tarisa vatengi vako varipo
Kana mabhizinesi akatadza kukura, vanobva vatofunga kuti imhaka yekuti havana vatengi vakakwana. Uku kufungidzira kwakajairika, saka usamhanyira kumhedziso. Panzvimbo pekuisa simba rako rese pakutenga kwevatengi, unofanirwa kuvandudza zano rako rekuchengetedza vatengi.
Kuenzaniswa nevatengi vatsva nevatengi vakangotenga kamwe chete pawebhusaiti yako, vatengi vakavimbika:
wedzera zvimwe zvinhu kungoro dzavo dzekutenga
uine mwero wepamusoro wekushandurwa
gadzira mari yakawanda nguva dzese pavanoshanyira saiti yako
Usandibata zvisirizvo sezviri pachena kuti rakanakira bhizinesi rako kana uchikwanisa kuramba uchiwana vatengi vatsva. Asi iyo inodhura nzira yekutengesa. Zvinonyanya kubatsira kuenda shure kweiyo iripo vatengi base. Sei? Zvakanaka, kune chimwe chinhu chakareruka sekuti vanhu ava vatove neruzivo nechiratidzo chako. Ivo vanoziva kushandisa kwavo zvigadzirwa, uye hapana yekudzidza curve.
Saka tarisa panzira dzekuvandudza ruzivo rwako. Edza kugadzira chirongwa chekuvimbika kwevatengi chinopa vanhu kurudziro yekushandisa imwe mari nguva yega yega pavanotenga. Yese euro inoshandiswa inogona kududzira mune yepeji poindi. Kana mutengi akaunganidza imwe nhamba yemapoinzi, vanokwanisa kuichinjanisa nezvikwereti kana zvimwe zvekusimudzira.
Tsvaga pakupedzisira saiti yakavimbika. Hapana munhu achazoda kutenga kubva kune yako ecommerce saiti kana ichiratidzika kunge isina kukwana kana kusavimbika. Chimwe chezvinhu zvekutanga zvaunofanirwa kuita kuve nechokwadi chekuti webhusaiti yako yakachengeteka.
Shandisa vhidhiyo madhimoni
Vatengi vanoda mavhidhiyo. Muchokwadi, inopfuura hafu yevatengesi venyika vanoti vhidhiyo ine yakanyanya kudzoka mukudyara ichienzaniswa nedzimwe nzira dzekutengesa. Mawebhusaiti ane mavhidhiyo anogona kuita avhareji mushandisi kushandisa 88% yakawanda nguva pamapeji avo.
Uyezve, mavhidhiyo anoita zvakafanana neshambadziro. Aya ndiwo marongero anoita eCommerce anoburitsa mamirioni emadhora mumari kubva kuvhidhiyo kushambadzira. Izvi zvinogadzira kuwedzera kwekuita pamwe nekufarira mune chero zvauri kuyedza kutengesa.
Mavhidhiyo anonzwika zvakanyanya nevanhu, saka vanogona kurangarira zvavakaona pane kungoverenga nezvazvo. Ndeipi nzira ine musoro yekuisa akakodzera mavhidhiyo pane yako ecommerce saiti?
Shandisa mapikicha kana uchisanganisira vatengi zvipupuriro
Wongororo dzevashandisi uye zvipupuriro inzira huru yekuratidza humbowo hwepfungwa. Asi meseji kubva kune munhu asina zita, asina chiso haina kunyatso kugutsa.
Tora zvipupuriro zvako nhanho kumberi. Wedzera pikicha uye sanganisira izere zita remunhu uye zita (kana zvakakodzera chigadzirwa chako).
Ziva kuti vatengi vako vanoda kutenga kubva kune avo nhare mbozha. Kungoti iwe uine ecommerce webhusaiti hazvireve kuti iwe unogona kufunga kuti vatengi vako vari kutenga chete kubva kumacomputer avo. Chokwadi ndechekuti vanhu vanoshandisa nharembozha uye mapiritsi kutenga online.
Kutsvagurudza kunoratidza kuti makumi mana muzana evashandisi venhare vakatenga chimwe chinhu online kubva pamidziyo yavo. Pamusoro pezvo, 40% yemamireniyoni vanotengesa pamafoni avo.
Iyi nhamba haigone kufuratirwa. Naizvozvo, ita shuwa kuti webhusaiti yako yakagadziriswa nharembozha. Kana yako saiti isiri yefoni inoshamwaridzika, inozodzora zvingangotengeswa. Kune avo venyu vasina saiti yakagadziridzwa nhare, zvinogona kuve chimwe chezvikonzero chauri kuona kudzikira mukutengesa. Ini ndingaite icho chekutanga pane zvako zvekuita-zvinyorwa. Chimwe chinhu chaunofunga nezvacho kuvaka nharembozha.
Gadziridza zvikamu zveiyo nzira yekutengesa
Varidzi vezvitoro vanowanzo cherekedza vamwe varidzi vezvitoro zveecommerce vanozvirumbidza pamusoro pehuwandu hwekutengesa hwavanogadzira zuva nezuva. Zvichakadaro, zvinonakidza, panguva imwechete, zvinosuwisa kune avo varidzi vezvitoro vari kuita zvese asi vachiri kutadza kuburitsa nhamba inobatika yekutengesa.
Chaizvoizvo, hapana wakaoma uye unokurumidza mutemo kuti uwane zvimwe kutengesa muchitoro chako cheecommerce. Izvo zvese zvinoenderana nerudzi rwee-commerce chitoro chaunoshanda, vateereri vauri kunongedza, uye nemabatiro aunoita chitoro chako.
Zvikonzero nei iwe usingakwanise kuwedzera ecommerce kutengesa. Ngatipfuurei nerunyorwa uye tsvaga zvikonzero zvinokutadzisa kutengesa zvimwe zvigadzirwa zvako nemasevhisi online.
Iwe uri mune pfungwa yekuti vanhu varikukanganisa
Chimwe chezvikonzero zvikuru nei chitoro chako chisiri kuburitsa yakanaka ecommerce yekutengesa ingangodaro nekuti ivo vari kungonanga isiriyo musika. Vanhu vanogona kunge vasingafarire zvigadzirwa zvako, kana vanogona kunge vasiri ako anotarisirwa musika. Iwe unofanirwa kuchengeta zvese izvi zvinhu mukutarisa uchishambadzira zvigadzirwa zvako.
Hauna kunyatso simbisa runako runodiwa. Chimwe chikonzero chinogona kukanganisa yako ecommerce kutengesa maakaunzi inyaya yekuti iwe hauna kuseta iyo yekutengesa fanera nemazvo. Vazhinji vevanhu vanouya kuwebhusaiti yako havawani zvigadzirwa zvavari kutsvaga.
Heano maitiro akajairwa mushandisi rwendo anoenda:
Mushanyi anoona kushambadza uye anotsvaga chigadzirwa
Shanyira akakodzera zvigadzirwa webhusaiti
Tsvaga chigadzirwa pane webhusaiti uye wobva watarisa mutengo wacho
Iwe unofarira chigadzirwa uye woisa odha
Zvino, kana mushanyi akasawana chigadzirwa papeji, ivo havangatore rimwe danho. Pane kudaro, mushanyi angangodzvanya bhatani re "kumashure" uye oenda kune imwe peji rewebhu, zvichikonzera yakakwira bounce mwero uye yakaderera masosi.
Vatengi havavimbi webhusaiti yako
Kana vatengi vasingavimbe newebsite yako, ivo havangatenga kubva kwauri. Ichokwadi. Edza kutsvaga chikonzero chikonzero chekushomeka kwekuvimba. Kugadzirisa nyaya yekuvimba, iwe unofanirwa kufunga:
Wedzera chitupa cheSSL kune webhusaiti yako. Zvitifiketi zveSSSL zvinoita kuti webhusaiti yako ichengetedzeke pamabasa.
Kumbira vatengi vako kuti vakukurudzire zvakanaka pasocial media. Ivo vanogona kukupa iwe kushevedzera-kunze kana kuwedzera wongororo yakanaka yechitoro chako pawongororo yekuyera mawebhusaiti.
Kuti uve nechokwadi chekuti unogadzirisa zvido zvevatengi nekukurumidza pavanongotumirwa. Izvo zvinoderedza zvisina kunaka kutaura pamusoro pechitoro chako chepamhepo.
Mitengo yako yakanyanya kukwirisa
Vazhinji varidzi vezvitoro vane nguva yakaoma kunzwisisa kuti kutengesa chigadzirwa nemutengo wakakwirira hakuzovaitire chero chakanaka. Dambudziko nderekuti vanhu vanongotenga kubva kune mawebhusaiti anopa zvigadzirwa zvine mutengo wakaringana. Kana mumwe munhu ari kutengesa chigadzirwa nemutengo wakakwirira kupfuura wenguva dzose, vanhu havangatenge kubva kuchitoro icho chepamhepo. Kune akawanda mutengo wekuenzanisa mawebhusaiti ayo vatengi vanoshandisa kuenzanisa mitengo yezvigadzirwa zviripo online. Ivo vanoita rese research vasati vatenga chero chigadzirwa. Ita shuwa kuti mutengo wemutengo pane zvigadzirwa zvako wakarurama.
Iyo webhusaiti haina kunyatsogadziriswa kana kuti yakaoma kushandisa. Chengetedza zvakanyanya rwendo rwevashandisi pawebhusaiti yako. Tsvagiridzo inoratidza kuti vatengi vangangobhadhara zvakanyanya kana vakaona isina musono rwendo rwevashandisi muchitoro chewebhu. 57% yevashandisi veInternet vakati havangakurudzire bhizinesi riine webhusaiti isina kugadzirwa nharembozha, maererano neongororo yakaitwa naSweor.
Iwe hauna email chinyorwa
Nyanzvi dzekushambadzira ndedzekufunga kuti email kushambadzira ichiri imwe yedzakanakisa nzira dzekuwedzera ecommerce kutengesa. Nekudaro, dambudziko nderekuti vazhinji varidzi vezvitoro zveecommerce havana email runyorwa. Ivo havaise mari mukutungamira chizvarwa uye vanovimba chete nema organic kana akabhadharwa nzira. Zvinoenderana neInternet Zvemari, kushambadzira email kunogadzira iyo yepamusoro Kudzoka paInvestment (ROI).
Basa rako revatengi harisi iro raunoda ta
Ongororo dzepamhepo dzinogona kugadzira kana kuputsa bhizinesi rako reecommerce. Kana vatengi vako vakakupa wongororo yakaipa, zvinoreva kuti havasi kufara nebasa rako. Iwe unofanirwa kudyidzana nevatengi ava uye kuvapa kukumbira ruregerero nezvehurombo hwebasa uye wozovabvunza kuti ungavagutsa sei uye zvichemo zvipi zvavaive nazvo? Unogona kuwana zvirinani kuongororwa kwevatengi pamawebhusaiti seTrustPilot, HostAdvice, nevamwe vazhinji. Ingo tsvaga "YAKO BRAND" + Ongororo muGoogle kutsvaga.
Nguva yekutumira inotyisa
Iwe haugone kuwana e-commerce kutengesa nekuti yako nguva yekutumira yakanyanya kukwirira. Vanhu vazhinji vanoda kutora zvigadzirwa zvavo muzuva kana maviri. Sezvo Amazon inopa premium kuendesa (zuva rimwe chete rekutakura), vanhu vanosarudza masevhisi avo. Kunze kwekunge iwe uri kutumira zvigadzirwa kubva kuChina, zvigadzirwa zvako zvinofanirwa kutumirwa mune isingasviki vhiki.
Ive neshuwa yekutaura zvakajeka zvese zvekutumira pane peji rekutarisa, uye pane iro chigadzirwa tsananguro peji kuti vanhu vazive nguva yekutarisira kugamuchira chaunoda chigadzirwa.
Nzira dzekuwedzera Kutengesa Kwepamhepo
Iye zvino zvaunoziva zvikonzero zvakajairika zvinopa kudzikira kwekutengesa kwepamhepo, heano dzimwe nzira dzaungawedzera kutengesa ecommerce muzvitoro zvako.
Vaka chivimbo muchiratidzo chako
Wongorora mamwe emazano iwe aunogona kushandisa kuvaka vatengi kuvimba nezita rako.
Natsiridza mhando yezvigadzirwa zvako. Tengesa izvo zvinotsanangurwa nechigadzirwa chako. Izvi zvinoratidza kuti iwe uri akatendeka nevatengi vako.
Chengetedza vatengi vanobatanidzwa pamapeji ako ehupfumi. Iwe unogona kuitisa webinars, rekodhi mhenyu vhidhiyo yeimba yako yekuchengetera / hofisi, uye wotanga kupaaways. Zvese izvi zviitiko zvinokubatsira iwe kukwezva vatengi vako.
Govera mushandisi akagadzira zvemukati pamablog ako, mapeji enhau, webhusaiti. Izvi zvinogona kuve zvipupuriro zvezvigadzirwa zvako kana ma tweets kubva kune vashandisi vako vaive neruzivo rwakanaka rwekutenga kubva kune yako chitoro chewebhu.
Kumbira vashandisi kuti vape ongororo yakatendeseka yebasa rako pane ekuongorora uye ekuyera mawebhusaiti.
Set mitengo yenyu nemazvo
Iye zvino zvawakavaka kuvimba, vanhu vachashanyira chitoro chako chepamhepo. Inguva yekuisa makotesheni akakodzera kuti vanhu ava vatenge kuchitoro chako.
Dzidza nezvemutengo uyo zvimwe zvitoro zviri kubhadharisa chigadzirwa chimwe chete. Pamwe iwe unogona kutora mukana wemutengo seyako yakasarudzika yekutengesa poindi.
Chinja mutengesi wako kana iye ari kutengesa chigadzirwa nemutengo wakakwira. Iwe ungatofanira kutsvaga pamusika weizvi asi zvichave zvakakosha munguva refu
Funga kudzikisa mitengo yekutumira kana kupa yemahara kutumira kana vanhu vakashandisa zvinopfuura chiyero muchitoro chako, taura zana euros kana madhora.
Gadzira Yakasarudzika Kutengesa Chirevo (USP)
Chii chinoita kuti iwe uonekwe kubva kune mamwe ese ezvitoro zvepamhepo?
Ndeupi mutengo wechigadzirwa chako?
Hwakanaka sei chigadzirwa?
Ndeupi rudzi rwebasa revatengi raunopa?
Zvino ita mari idzi
Dzimwe nguva hautomboziva kuti yako USP chii. Kana zvirizvo, shanyira mawebhusaiti ekuongorora uye uone zviri kunyorerwa nevatengi vako nezvako uye nemazwi akakosha avari kushandisa. Aya ndiwo mazwi akakosha anotsanangura sevhisi yako kune vateereri vako. Vashandise mune yako yekushambadzira zvinhu sezvo iwo ari mazwi kana maonero evatengi.
Gadzirira uye ugovane webhusaiti yekuyedza
Iwe unongova nesekondi gumi neshanu chete kuti utariswe nemushandisi. Ukatadza, unozvirasa. Iyi inonzi 15-yechipiri mutemo wewebsite usability. Mutemo wechipiri wakakosha weKushandura Rate Optimization (CRO) ndiwo mutemo wekubaya matatu. Inoti mushandisi wesaiti anongoda matatu chete kuti asvike peji rekutarisa. Ita shuwa yekukwirisa webhusaiti yako zvinoenderana nezvaunoda.
Govera yakasarudzika vatengi
Vanhu vane mukana wekutenga kubva kumakambani anogadzirisa zvichemo zvevashandisi zvakanaka. Ndicho chikonzero chitoro chako chinofanira kupa sevhisi inoshanda kune vatengi vako. Une rimwe basa raunofanira kuita:
Wedzera Live Chat sarudzo kune yako eCommerce chitoro.
Rega mabhatani ekupindura yakawanda yemibvunzo inobvunzwa nevanhu. Izvi zvinoderedza huwandu hwenyaya dzaunofanirwa kupindura nemaoko uye kuwedzera huwandu hwezvikumbiro zvaunogamuchira.
Tumira zvakajairwa maemail kune ako vatengi uye upindure kwavari nekukurumidza kana paine zvichemo
Shandisa chairo rutsigiro rwefoni sezvo ichigona kuwedzera kuvimba kwechivigiro chako.
Deredza nguva dzekutumira
Chii chinoitwa nevanhu kana vasina kuwana maodha avo nenguva? Ivo vane mashoma sarudzo. Ivo vanogona kukanzura maodha avo, kuchaja yavo kiredhiti kadhi, kana kutumira isina kunaka ongororo nezve e-commerce chitoro.
Mune ecommerce, nguva dzekutakura dzinotamba basa rakakura pakuyera chitoro chako. Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti iwe unotumira iwo maodha munguva yekutsanya. Unogona kudzikisa huwandu hwekunonoka kuendeswa ne:
Kupa yemahara kutumira. Vatengi vako vanofanirwa kuve nesarudzo yekusarudza mhando yekutumira yavanoda. Kana ivo vachida kukurumidza kutumira, ivo vanofanirwa kubhadhara yakawanda nezvayo. Zvikasadaro, ivo vanogona kugara vachienda kune yemahara kutumira sarudzo.
Uchishandisa chechitatu-bato zvigadzirwa (3PL) kubata yako chitoro logistics uye kuendesa oparesheni.
Kana iwe uchinetseka kutsvaga nzira nyowani dzekuwana vatengi vakawanda uye kuwedzera mari, aya matipi anogona kukubatsira izvozvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Maitiro ekuwedzera ecommerce kutengesa
Izaskun Apraiz - Dhijitari Muzvinabhizimusi akadaro
Chinyorwa chakanaka kwazvo! Ini ndakarasika kwemakore akati wandei ndichitsvaga bhizimusi rinobatsira kudzamara ndawana yekushambadzira yakabatana ...
Kubudikidza neshamwari ndakawana kosi yakandibatsira kubvisa kubva pa0 kuenda ku100 nebhizimusi iri, maitiro ekuita mari online uye kurarama mararamiro andaida.
Pindura Izaskun Apraiz - Dhijitari Muzvinabhizimusi